एकतामा लागेको कालो बादल ओली र प्रचण्डबीच आज हुने “वान टु वान” वार्ताले हटाउँला त ? » खबरहरुको एउटै केन्द्र
एकतामा लागेको कालो बादल ओली र प्रचण्डबीच आज हुने “वान टु वान” वार्ताले हटाउँला त ?
सोमबार, बैशाख ३, २०७५ ११:३३ मा प्रकाशित !
काठमाडौँ, ३ बैशाख । पार्टी एकताको विषयमा अन्योल बढ्दै जाँदा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुबीच सोमबार भेटवार्ता हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेटवार्ता हुन लागेको हो ।
PREVIOUS POST Previous post: आज सोमबार,तपाईको राशिफल यस्तो छ
NEXT POST Next post: आईपीएल : पञ्जाबसँग चेन्नई चार रनले पराजित
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते सोमबार, बैशाख ३, २०७५ ११:३३
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस सोमबार, बैशाख ३, २०७५ ११:३३
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण सोमबार, बैशाख ३, २०७५ ११:३३
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी सोमबार, बैशाख ३, २०७५ ११:३३
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? सोमबार, बैशाख ३, २०७५ ११:३३